China yakatungamira ziso chati chati bhokisi 5 metres E Kugadzira uye Fekitori | SDK
Iyo yakatungamira ziso chati chati bhokisi rakavakirwa pamisimboti yesimba yekuchengetedza, yakaderera kabhoni, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye kunyatso kuona.
Iyo inosiya mufananidzo weakare-echinyakare mwenje mabhokisi ane ukobvu hweanopfuura gumi masendimita, iyo isiri yunifomu uye yakapusa kuchinja ruvara. Inoshandisa tekinoroji yepamusoro-gwara gwara tekinoroji. Maitiro ese anotariswa nekombuta uye akapedzwa neyakagadziriswa laser. Bhodhi remwenje rinoita kuti mwenje wechiyero chebhokisi yunifomu, inyoro uye yakajeka. Yakagadzirwa neye Ultra-yakatetepa yemazuva ano mwenje bhokisi rinoenderana chaizvo neziso chati. Iyo aluminium alloy furemu inogona kuvhurwa uye kuvharwa kutenderera. Izvo zvinoonekwa zvepamusoro bhodhi zvinogona kutsiviwa chero nguva. bonde. Uchishandisa magetsi emagetsi e12V DC, kupisa kwemagetsi kwakadzika uye kuderera kwesimba. Ukobvu hweyese yakajeka bhokisi ndeye 3CM chete, yakasviba-yakatetepa uye yakasununguka, kurema kurema, nyore kutakura; yakaderera simba rekushandisa, kupenya kwakanaka, pasina kupenya
1. Ruzivo uye fashoni, kuona kwakaringana: Ultra-yakatetepa yekuona acuity chati chiedza bhokisi, yunifomu luminescence, kuitira kuti kusiyana kwechiedza nerima kwechimwe nechimwe chinoonekwa chinowirirana, chiyero chekuona chinoitwa nenzira kwayo, uye mhedzisiro yekuyedza ndeyechokwadi. Zviri nyore kutsiva iyo optotype, iyo inogadzirisa mukana wekubata nemusoro iwo optotype.
2. Simba-rinoponesa, zvakatipoteredza zvine hushamwari, rakasimba: Hupenyu hwebasa hwechokwadi LED mwenje-inoburitsa diode ndeye 50,000 kusvika 100,000 maawa, ine yakaderera mwenje kuora uye hwakareba hupenyu hwebasa; simba rekuchengetedza.
3. Dzivirira kuona, hutano uye kuchengetedzeka: DC dhiraivha, hapana kudzima; hapana zvinhu zvinokuvadza zvakaita semekiyuri uye xenon, hapana kupindira kwemagetsi; voltage yakachengeteka uye yazvino zvidiki, zvishoma kupisa, uye hapana njodzi dzekuchengetedza.
Akatungamira ziso chati chati bhokisi
Yakajairwa izwi logarithmic ziso chati
2.5m bvunzo chiedza bhokisi, 5m bvunzo mwenje bhokisi
Chiyeuchidzo: Zvakanyatsorambidzwa kubatanidza zvakananga paneli mwenje kune 22OV kana 110V AC bvunzo yesimba. Iyo huru bhodhi yebhokisi rechiedza ichakuvara kana ichinge yakabatana zvakananga pasimba rekuyedza.
Pashure: Ophthalmic ultrasound biomicroscope SW-3200S
Zvadaro: Yemagetsi keratometer SW-100
Chati yeziso re LED
Led Eye Chart Chiedza Bhokisi, Iyo yakajairwa logarithm ndeye 5 metres
Akatungamira mhando multi-basa
Ultra-yakatetepa ziso chati yakajeka bhokisi
Yakazara otomatiki emakomputa ekutarisa mitaFL-800
Corneal curvature mitaBL-8002